Trigger Rally, lalao loharano misokatra ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives | Ubunlog
Trigger Rally, lalao loharano misokatra ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives
Amin'ity lahatsoratra anio ity dia hijery Trigger Rally isika. Ity dia a lalao familiana fiara maimaimpoana maimaimpoana sy malalaka, izay manandrana maka tahaka ireo izay fantatra amin'ny anarana hoe Ford Focus an'i "Carlos Sainz" na Mitsubishi Lancer an'ny "Tommi Makkinen". Aorian'ny fametrahana azy dia hahita lalao hazakazaka mpilalao tokana isika. Ho azo zahana amin'ny GNU / Linux sy Windows.
Amin'ity fampiharana ity dia hahazo fanaingoana 3D rally a maotera fizika tsara ho an'ny fanodinana. Hanome antsika sarintany mihoatra ny 100 hilalao. Izy io koa dia hanome antsika karazan-tany samihafa toy ny loto, aspaly, fasika ary ranomandry ankoatry ny hafa, ary koa ny toetry ny andro isan-karazany toy ny hazavana sy zavona izay hanome ity fanahafana rallye ity ho teboka fanampiny amin'ny hafa. lalao maimaim-poana mitovy foto-kevitra.
Mba hilalao dia tsy maintsy ataonao amin'ny alàlan'ny sarintany amin'ny fetra voafaritra. Matetika dia tery tokoa ireo fotoana ireo ka afaka manandrana manatsara bebe kokoa hatrany isika handresy ireo isa voarakitra. Ireo hazakazaka rehetra misy dia tsy maintsy vitaina ara-potoana mba handresena ny hetsika, izay hahatratrarantsika mamoha hetsika fanampiny sy fiara.
1 Toetra mampiavaka ny famoriam-bahoaka
2 Mametraha Trigger Rally amin'ny Ubuntu sy ny rafitra nateraka
3 Esory ny famoriam-bahoaka Trigger
Toetra mampiavaka ny famoriam-bahoaka
Fepetran'ny fitaovana ambany. Trigger Rally dia miasa tsara amin'ireo ekipa manana loharanon-karena ambany sy tsy mahomby. Aza avela hisy manantena sary avo lenta na toy izany. Raha toa ka mitaky zavatra be dia be avy amin'ny ekipanay ny zavatra toa ny felam-panala na ny ahitra izay hitantsika amin'ny lalao dia hanana safidy isika hanafoanana azy ireo mba milalao milamina kokoa.
Ny vokatry ny toetrandro, ny fizika amin'ny tany na ny feon'ny copilot dia endri-javatra mahafinaritra hafa amin'ny lalao. Ny ankamaroan'ny sarintany dia misy fanamarihana copilot sy sary masina ampiasaina hanampy antsika mandritra ny fitondrantsika fiara.
Un mora ny manova lalao. Ny hazakazaka dia tsy inona fa ny fisie sy ny firafitra XML mba hahafahantsika manova azy ireo araka izay itiavantsika azy. Ho an'ity dia azontsika atao ny misintona ity fampianarana manaraka ity izay omanin'izy ireo amintsika avy ao amin'ny pejy web. Azontsika atao ihany koa ny misintona sarintany sy hetsika hafa momba ny lalao, izay vonona ny alaina ho plugins.
Misy sari-tany tutorial sy XML. ny ankamaroan'ny antsipirian'ny fikirakirana ho an'ny seho fampisehoana sy raki-peo dia azo ovaina amin'ny fisie fikirakirana, izay lahatsoratra tsotra. Azontsika atao ny manokatra ity rakitra ity amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ity baiko manaraka ity miaraka amin'ny mpamoaka lahatsoratra izay tianay indrindra:
Manana fomba roa ny lalao, ny "varavarankely" voalohany ary ny "efijery feno" faharoa. Na izany aza tsy midika izany fa azo alamina mandritra ny lalao. Tsy misy safidy fanamboarana ao aminy raha vao manomboka izany. Raha hanova azy dia tsy maintsy ampifanarahintsika amin'ny fisie voalaza etsy ambony.
Raha misy te hahalala bebe kokoa momba ity lalao ity dia afaka manamarina ireo fiasa rehetra sy ny takiana avy ao aminy izy tranokalan'izy ireo.
Mametraha Trigger Rally amin'ny Ubuntu sy ny rafitra nateraka
Ao amin'ny kinova farany an'ny Ubuntu (Notsapaiko tamin'ny kinova 16.04 ary niasa lavorary), Trigger Rally dia azo alaina ao amin'ny trano fitahirizana rafitra ofisialy. Hahafahantsika mametraka ity lalao ity amin'ny fampiasana ny Center Center na ny fampiasana ny baiko ao amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T):
Na izany aza, amin'ny kinova taloha an'ny rafitra fiasa, hametrahana ny lalao na raha te-hahazo doka ho azy avy hatrany isika dia tsy maintsy apetrantsika amin'ny PPA mifanaraka aminy. Ho an'ity dia hampiasa ny terminal (Ctrl + Alt + T) izahay. Ao no hanoratantsika ireto baiko manaraka ireto:
Raha mbola tsy ananantsika dia nampiany ny fitehirizana programa, hanampy an'ity manaraka ity izahay:
Amin'ity fotoana ity dia hanavao ny manager manager amin'ny alàlan'ny baiko izahay:
Ary izao dia afaka mametraka ny lalao isika amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity:
Esory ny famoriam-bahoaka Trigger
Mba hamongorana ity lalao ity amin'ny rafitra fiasanay, tsy mila manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T) ary manoratra izao manaraka izao:
Raha nampidirinao ny tahiry hametrahana ilay lalao ary tsy tadiavinao ao amin'ny lisitrao intsony izany dia azonao atao ny manala azy amin'ny fanoratana ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal:
Manontany ny mpamorona ny lalao mpampiasa izay manao tatitra momba ny hadisoana sy ny fangatahana endri-javatra mety mampiasa ny rafitry ny tapakila avy amin'ny sourceforge.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Trigger Rally, lalao loharano misokatra ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives
Cryptomator, rindrambaiko fanaingoana amin'ny lafiny client
Natron, loharano misokatra Aorian'ny rindrambaiko toy ny effets toy ny lozisialy